Qaabka Ugu Macaan Ee Galmada Buuga Raaxada Qeybtii 3aad | Gaaloos.com
Home » galmada » Qaabka Ugu Macaan Ee Galmada Buuga Raaxada Qeybtii 3aad
Waxaynu ogsoonnahay in noolaha oo dhami aanu isu galmoon ilaa uu hordhac (Shukaansi) sameeyo. Kalluunka, Shimbiraha, Naasleyda iyo xitaa Cayayaanku isuma galmoodaan iyaga oon hordhac dheer soo marin, kaasi oo mararka qaar dhib badan. Shukaansigu waxa uu door muhiim ah ka cayaaraa galmada, isaga oo ah garoon tijaabo lagu eegayo ilaa iyo inta uu isu qalmo dookha labada qof.
Waxa kale oo shukaansigu uu ka dhigan yahay u diyaarin qanjirrada jinsiyeed loo diyaarinayo hawsha galmada.
Title: Qaabka Ugu Macaan Ee Galmada Buuga Raaxada Qeybtii 3aad